Home Wararka Dibada Taliyihii sirdoonka Iiraan oo shaqada laga eryay iyo labo sabab oo la...
Taliyihii sirdoonka Iiraan oo shaqada laga eryay iyo labo sabab oo la hadal hayo
Hussein Tayeb, oo ahaa madixii sirdoonka ee ciidamada kacaanka Iiraan, IRGC, ayaa shaqada laga eryay.
Sida lagu shaaciyay Wakaaladda Wararka ee Sepah News, afhayeen u hadlay taliska IRGC oo lagu magacaabo Ramazan Sharif ayaa sheegay in Janaraal Mohammad Kazemi loo magacaabay taliyaha cusub ee sirdoonka si uu u baddalo Mr. Tayeb.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Hussein Tayeb laga dhigay “la-taliyaha sarkaalka hoggaanka u haya ciidanka IRGC.”
Hussein ayaa taliyaha sirdoonka Iiraan ahaa tan iyo sanadkii 2009-kii.
Lama shaacin sababta keentay in xilka laga qaado Taeb oo ka mid ahaa mas’uuliyiinta ugu magaca wayn Iiraan, balse waxaa jirta hadal-hayn la isla dhex marayo.
Labo qodob oo loo sababeeyay go’aanka shaqada looga eryay taliyaha.
Tan koowaad waa in dhawaan ay warbaahinta Israa’iil shaaciyeen in Hussein Tayeb la la’yahay muddooyinkan, uuna ku howlan yahay qorshe ku aaddan in muwaadiniin reer Israa’iil ah lagu dilo gudaha waddanka Turkiga.
Qodobka labaad ee kusoo beegmay xil ka qaadistiisa waa dhimashooyinkii shakiga badan dhaliyay ee saraakiil sar sare oo ka tirsanaa Kacaanka Iiraan, kuwaasoo dhawaan la dilay.
Tayeb ayaa wajahayay eedeymo la xiriira in uu ku fashilmay ogaanshaha dadkii ka dambeeyay dilalka saraakiisha ee ka dhacay gudaha Iiraan.
Bishii May ayay ahayd markii sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada kacaanka Iiraan “lagu dilay” magaalada caasimadda ah ee Tehran kaddib markii ay weerar la beegsadeen labo nin oo hubaysan.
Dhacdooyinka noocan ah ayaa si dhif ah uga dhaca dalkaas.
Warbaahinta Iiraan ayaa xilligaas tebisay in labo nin oo mooto saarnaa ay fuliyeen dilka Kornayl Xasan Sayyad Khodayi, xilli uu ku jiray gaarigiisa oo yaalla afaafka hore ee girigiisa magaalada Tehran.
Waa kuma Hussein Tayeb?
Hussein Tayeb waxa uu ka mid yahay hoggaamiyeyaasha Iiraan ee magacooga ay warbaahintu hadal hayeen labaatankii sano ee lasoo dhaafay.
Waxa uu qaraabo la yahay Mojtaba Khamenei oo ka mid ah wiilasha uu dhalay Ayatollah Khamenei.
Magaciisa waxa uu ku jiraa liisaska shakhsiyaadka cunaqabataynta la saaray ee Midowga Yurub iyo Mareykanka kaddib markii lagu eedeeyay in uu ku lug leeyahay falal xuquuqda aadanaha ka dhan ah oo ka dhacay Iiraan.
Waxa uu ciidamada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ku biiray sanadkii 2007-dii.
Sanadkii 2009-kii, Ayatollah Khamenei ayaa u magacaabay ku xigeenka taliyaha waaxda sirdoonka ee kacaanka, xilligaas oo uusan jirin ciidanka hadda loo yaqaanno IRGC. Isla sanadkaas gudihiisa ayuu la wareegay hoggaanka sare ee sirdoonka Iiraan.
Sannadihii lasoo dhaafay, wixii ka dambeeyay markii la dilay taliyihii ciidamada kacaanka Iiraan, Qassem Soleimani, warbaahinta reer Galbeedku waxay sheegayeen in Hussein Tayeb uu u wareegay dhinaca Ciraaq.
Warbixin ay Wakaaladda Wararka ee Reuters daabacday bishii July ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in Ayatollah Khamenei uu Hussein Tayeb u diray Ciraaq kaddib markii uu Ismail Qaani “ku guul darraystay” shaqada.
Reuters warbixinteeda ayaa lagu sheegay in ujeeddada uu Tayeb u tagay Ciraaq ay ahayd sidii loo xaqiijin lahaa in maleyshiyaadka Shiicada ay weerarro la beegsadaan ciidamada Mareykanka.
Previous articleMaxay tahay sababta sii jiritaanka bani’aadamka ay ugu xirnaan karto Afrika?
Next articleIsbarbadhigga badeecadaha ay Soomaaliya dhoofiso iyo waxa loo soo dhoofiyo
Madaxweynaha Hir-Shabeelle Mudane Cali Guudlaawe ayaa ka qeybgalay shirka Golaha Wadatashiga...
Barcelona Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Gavi, Maxaa Cusub?